Waxaa jira dad badan oo waa in fekerayo, kuwaas oo mid ka mid ka mid ah door bidaan MPC iyo VLC Media Player. Dad badan oo sida la barbardhigo waa in la doonaya in articles qaar ka mid ah halkaas oo ay labadasi Media Xoog Player s yimaado madaxa madaxa iyo marka la barbar dhigo feature kasta dhinaca. Halkan waxaan la maqaal, is barbar kuwaas oo labada Players Media jecel yahay; oo diiradda saaraya oo dhan muuqaalada iyo faahfaahin kale oo kasta oo muhiim ah, taas oo aanu karo.
Qeybta 2: MPC (Media Player Classic) Media Player
Qeybta 3: 3 dib u eegista caan ku saabsan MPC
Qeybta 4: 3 dib u eegista caan ku saabsan VLC
VLC Media Player, ayaa muran la'aan ciyaaryahanka Media iyo mid ka mid ah ugu isticmaalay Media Player ugu jeclaa diiwaan gashan hoos brand ee VideoLAN urur aan faa'iido doon ahayn.
Features Key ee VLC Media
1. Latest version laga heli karaa waa 2.2.1.
2. interface Simple, Media Fast iyo awood leh Player.
3. Works ku dhufto oo dhan sida Windows, MAC, macruufka , Linux iyo UNIX.
4. ciyaari kara oo dhan codecs la baakad lahayn wax codec loo baahan yahay.
5. gebi ahaanba bilaash ah si ay u isticmaalaan.
6. karaa in la sameeyo qaab beddelidda, warbaahinta iyo xitaa geeyo.
7. Size of duwan VLC Media Players ku salaysan Platform ah, tusaale ahaan Windows VLC Media ciyaaryahan 2.2.1 waa 28 MB, 34 MB ee Mac, iyo sida in.
8. Taageerada ku dhowaad dhammaan qaabab laga bilaabo 3GP , ASF, AVI , DVR-MS, FLV, Matroska, MIDI, Qaabka QuickTime File, MP4, Ogg, OGM, regelingen, MPEG-2 (ES, PS, TS, PVA, MP3) , AIFF, audio ceeriin ah, ceeriin DV, MXF, VOB, dhexena, DVD-Video, VCD, SVCD, CD Audio, DVB, Cinepak, Dirac, DV, H.263, H.264 / MPEG-4 AVC, H.265 / MPEG HEVC, HuffYUV, Indeo 3, MJPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Qeybta 2, RealVideo 3 & 4, Sorenson, Theora, VC-1, VP5, VP6, VP8, VP9, DNxHD, Prores iyo qaar ka mid ah wmv si AAC, AC3, ALAC, Amr, DTS, DV Audio, XM, FLAC, Waxaa, meyska, Ducooyinkii, Daanyeer ee Audio, MP3, Opus, PLS, QCP, QDM2 / QDMC, faataxada, Speex, Screamtracker 3 / S3M, TTA, Vorbis, WavPack, WMA (WMA 1/2, WMA 3 qayb ahaan) iyo qaar badan.
MPC-HC Media Player, tartan kale oo khafiifa Player oo ka mid ah VLC Media Player, sidoo kale waa il furan Player sida VLC Media Player.
1. Latest Version heli karo waa 1.7.8
2. Hawlaha kaliya on Windows
3. Waxa kale oo loo isticmaali karaa sida DVB Player
4. gebi ahaanba bilaash ah si ay u isticmaalaan
5. Size of Media Player qiyaastii waa 18 MB
6. Taageerada video ka wada dhexeeyeen iyo qaabab file maqal ah ayaa diyaar u ah loo maqli karo
Qeybta 3: 3 dib u eegista caan ah oo ku saabsan MPC
Marka aan u soo ururin 3 dib u eegista caan ku saabsan MPC, waxaa laga yaabaa in aan helno, kuwaas oo
Halkan waxaa ku Screenshot ee la mid ah.
1. "Tartanka halis ah kulankii VLC, hadda haddii ay kaliya ciyaari lahaa .iso files Waxay noqon lahaa kaamil ah: D"
2. "taageero video Best: MPC-HC"
3. "saarka Great, fudud oo degdeg badan"
Gunaanad: On qayb gebogebaynta, waxaan dhihi karaa in Player Media Classic heysta qaar ka mid ah ka mid ah dadka isticmaala fiirsaneysa waa arrin fudud in la isticmaalo, fududahay in la rakibo meel, ma qaadan meel ku filan. Laakiin tan iyo dadka isticmaala ay ku kooban sida software waxaa kaliya ku koobnayn Users Windows, Player Media Classic dambaysaa in tirada dadka isticmaalaya mid caalami ah. Marka, waxaan maraan dhowr dib u eegista, waxaana imaan karaa gaarnay in, Media Player Classic heysta qaar ka mid ah ku laayeen in ka badan VLC Media Player eego muuqaal ah, laakiin tan iyo fursadaha ku kooban isticmaalayaasha, dad badan waxay leeyihiin VLC Media Player at ugu yaraan in nidaamka. Shaqsi ahaan hadlayay, Media yihiin fasalka marka aan ka hadlo dhinacyada video ah, oo xitaa, marka aan dareemo kacsan oo la VLC Player dhinacyo kuwaas, si degdeg ah ayaan u baddashaan Media Player Classic.
Qeybta 4: 3 dib u eegista caan ah oo ku saabsan VLC
Guuritaanka dhinaca 3 dib u eegista caan VLC Media Player, waxaan dhihi karaa in Media this Player ayaa doorashada ugu fiican ee loogu talo galay dadka oo dhan oo adduunka ah. Fiiri snapshots iyo dib u la mid ah.
1. "Kaliya hal baahan yahay nooc kasta oo warbaahinta"
2. "VLC waa lagama maarmaan ...... .."
3. "taageero geeyo Best: VLC
Gunaanad: Tan, VLC Media Player waa ciyaaryahan boosaska badan, oo ka shaqeeya kala duwan madal, VLC Media ee Player, heysta qaar ka mid ah ku laayeen in ka badan Media Player Classic. Xitaa, taageerada qaab file, iriddu waa weyn kaliya sabab kale oo jacaylka weyn ee dadka dhinaca VLC Media Player. The dhinacyo Audio ee VLC Media jira wax badan ka wanaagsan yahay Player Media Classic. Iyadoo MPC waa waxa kaliya ee Windows, taa badalkeed waxay faa'iidooyin weyn u VLC Media. Waxaa dhici karta in mustaqbalka, Media Player shaqo ka bilowdey ku dhufto ee kale oo waxaa jiri doona tartan weyn ka hor. Marka la eego ka qayb diinta, Media Player Classic uu leeyahay qaar ka mid ah dhibcood xusid mudan in ka badan warbaahinta VLC. Isbarbar toos ah uu la badhxay haddii aadan users daaqadaha. Laakiin dadka isticmaala Windows, Media Player Classic iyo VLC Media, labadaba waa uun kuwa Liibaanay. Xitaa, waxaan labada Players Media ah! Hadda, waxa ay aad doorato, waxa ay u isticmaalaan! Ball waa in aad maxkamadda, iyo tan iyo labada waxaa laga heli karaa lacag la'aan ah, waa doorasho si aad u. Xusuusnow, guys Mac iyo madallo kale, waxay u baahan yihiin fikirka ma jiro Media ma Player Classic heli karaan for!
> Resource > Windows > MPC vs VLC Media Player, taas oo ah mid ka fiican?